कोरोना भाइरसबाट इटालीमा १४८ को मृत्यु, विश्वको अवस्था कस्तो छ ? - नेपालबहस
कोरोना भाइरसबाट इटालीमा १४८ को मृत्यु, विश्वको अवस्था कस्तो छ ?
| १९:१७:४५ मा प्रकाशित
२३ फागुन एजेन्सी । इटालीमा कोरोना भाइरसबाट १४८ जनाको ज्याान गएको प्राप्त पछिल्लो समाचारमा जनाइएको छ ।इटालीमा बिहीबारमात्र ४१ जनाको मृत्यु भएको समाचार आएको छ । यो समेतगरी यहाँ यस भाइरसको प्रकोपबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १४८ पुगेको हो ।
इटालीका विभिन्न २२ वटा शहरमा यसको प्रकोप देखिएको छ । इटालीले देशैभरिका विद्यालय, विश्वविद्यालय बन्द गराएको छ । सरकारले यो भाइरसको नियन्त्रणका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयन गराएको छ । उता संयुक्तराज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा पनि यस प्राणघातक कोरोना जीवाणु ‘भाइरस’का कारण एक व्यक्तिको मृत्यु भएपछि सङ्कटकाल घोषणा गरिएको अर्को एक समाचारमा जनाइएको छ ।
विश्वभर हाल कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको सङ्ख्या १ लाख ३ सय ७९ जना पुगेको, र तीमध्ये करिब ८० भन्दाबढी हजार चीनमा रहेको बिबिसीले जनाएको छ । गत डिसेम्बरको अन्त्यबाट चीनको हुबेई प्रान्तको उहान शहरबाट शुरु भएको यस कोरोना भाइरस सक्रमणबाट चीनमा मात्र तीन हजार ४ सय ८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
कोरोनाकै कारण दक्षिण कोरियामा हालसम्म ४३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । त्यसैगरी छ हजार ५९३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको शुक्रबार प्राप्त एक समाचारमा जनाइएको छ । जोखिम नियन्त्रण गर्न दक्षिण कोरियाका प्रधानमन्त्री चुङ स्ये–क्यूनले अनुहारमा लगाउने मास्क विदेश निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गरेको छन् ।
हेर्नुस विश्वको अवस्था कस्तो छ :
China 80,559 +150 3,042 +30 23,588 53,929 5,737
S. Korea 6,593 +309 42 6,416 135 52
Germany 577 +32 560 17 8
France 4237404 12 23
Spain 382 +1005+2 37439
Japan 381 +176329 46 34
USA 233 +12 14 +2 21098
Switzerland 138 +18 1 134 3
UK 116 1 97 18
Norway 106 +12 105 1
Sweden 101 +7 100 1
Malaysia 83 +28 61 22
Australia 60236 22 1
Kuwait 58 58
Bahrain 55 51 4
Canada 48 +11 40 8 1
Thailand 47 1 15 31 1
Austria 47 +4 4521
Taiwan 44 1 28 15
Iraq 40337
Iceland 37 +2 37
Israel 17 15 2
Lebanon 16 16 1
Czechia 12 12
Portugal99
Romania 8 +235
Pakistan6+1 6
Holy See 1 +1 1
Total: 100,379 2,108 3,408 51 40,980 55,991
स्वयंसेविकाले जोखिम भत्ता पाएनन् अझै ५ मिनेट पहिले
पूर्वराजाले दिए शुभचिन्तक तथा आफ्नाे उपचारमा खटिने डाक्टर र नर्सलाई धन्यवाद ५२ मिनेट पहिले
वीरको नयाँ भवन अक्सिजन अभावले सञ्चालनमा कठिनाइ १४ मिनेट पहिले
कोरोना बढेसँगै विदेशी पर्यटक मनाङमा अलपत्र १८ मिनेट पहिले
नयाँ सरकार कोभिडविरुद्ध सक्रिय हाेला त ? २३ मिनेट पहिले
राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशन स्थगित ४१ मिनेट पहिले
मानुषी लघुवित्त र दोर्दी जलविद्युतले आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै पुगे धितोपत्र बोर्ड २२ घण्टा पहिले
उपप्रधानमन्त्रीद्धारा आइसोलेशन तथा अक्सिजन थेरापी सेन्टरको निरीक्षण ४ दिन पहिले
जसपा भित्र चर्कियो रडाको ४ दिन पहिले
रातो मच्छिन्द्रनाथको यस वर्षको रथारोहण सम्पन्न ३ दिन पहिले
नेपाली बजारमा बढ्यो सुनको मूल्य ३ हप्ता पहिले
ज्यानमारा भाइरसबाट कञ्चनपुरमा थप तीनको मृत्यु २ हप्ता पहिले
बैशाख २७ मा बजेट अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस २ हप्ता पहिले
सुनसरीमा चट्याङ लागेर एकको मृत्यु २ हप्ता पहिले
डेरी उद्योगमा आगलागी हुँदा ७० लाख बढीको क्षति १ वर्ष पहिले
१२ कोरोना संक्रमित सम्पर्क विहीन ९ महिना पहिले
देशको पहाडी क्षेत्रमा आंशिकदेखि सामान्य बादल ४ महिना पहिले
बेलकोटगढी नगरपालिकाले स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गर्ने १ महिना पहिले